मर्च ,जाँड,रक्सि ,प्रहरी र आदिबासि अर्थतन्त्र : याम मगर – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
माघ २१, २०७६ १४:३५ मा प्रकाशित
४२-४३ सालतिर हाम्रो नयाँ घर बनाएको हो।जुन आजपनि केहि थपथाप गरेर काम चलाईएको छ। उक्त घर बनाउदा सघाउन आउने र हुट्टा सबैलाई साँझमा खाजा खुवाउने चलन थियो।खाजामा पकाएको मकै र जाँड दिने चलन थियो।त्यतिन्जेल रक्सिको ब्यापक प्रयोग भैसकेको थिएन।दिनभरि काम सघाएर साँझमा पकाएको मकै ( भाङङोको छोपले मोलेको ) र जाँड खाएर मान्छेहरु आनन्दले घर जान्थे। मलाई आजपनि झल्झलि याद छ,सघाउन आएका ईस्टमित्र र हुट्टा भाईका मान्छेहरु खास्तोको पोल्टामा मकै थापेर ग्वामग्वाम खान्थे।हामि पनि त्यसैगरि खान्थ्यौ। अलि जान्ने भएपछि हाम्रो घरभित्र र बाहिरका पुजाहरु र सस्कारजन्य कार्यहरुमा मुख्य धुपको रुपमा हाचक भुस्केट ( मर्च र भुस्केट )प्रयोग गरिएको देखियो। तथापि आदरणिय काका शिक्षक तथा समाज अध्यता B वीरबल घर्ति मगर ज्यु सँग बुझ्दा हाम्रोमा मर्च चढाउने चलन कान्छो नै हो भन्नुहुन्छ। ०६९ तिर बजार झरियो। तत्कालिन द्वन्द्वको कारणले वा अन्य कारणले बजार झरेका सामान्य मानिसहरुले अन्य काम सँगै मर्च र जाडरक्सि बनाएर घरखर्च चलाएको देखिन्थ्यो। यहि बेलातिर मर्च र जाडरक्सिमा प्रहरी हरुको अपरेशन देख्नपनि पाईयो।उसो त गाँउमै माओबादिहरुको आहान मा गाँउका आमासमुह आदिको सँलग्नतामा घैटो फोड अभियान पनि देखेकै हो। मोटामोटी नयाँ प्रहरी प्रमुख फेरिएसँगै जस्तो बजार एरियामा मर्च र जाँडरक्सि फाल्ने अभियान चलिरहन्छ।आजकल सामाजिक सन्जालको माध्यमले थाहा लाग्छ धेरै ठाउँ मा यस्तै चल्दोरहेछ। अब ठ्याक्क – १)मर्च , जाँडरक्सि निर्माण , बेचबिखन र उपयोग सामान्यतया आदिबासि समुदायले गरेको देखिन्छ। दुईचार अन्य समुदायकाले बाटो मा खुट्टा नटेक्ने घटना बाहेक। २)धेरैजनाको सुझाब हुन्छ-अन्य ब्यबसाय अपनाए पनि हुन्छ नि ! हुन्छ। तर ब्यबसाय सँचालन गर्न पैसा र धेरै बिषयमा ज्ञान शिप र अझै पुस्तैनि ज्ञान शिप चाहिन्छ।जुन आदिबासिहरुको पहुँचमा छैन,हुदैन। सामान्यत पुर्ख्यौलि ज्ञानशिप मानिसहरुलाई सहज र सजिलो लाग्छ। ३)सधै जाडरक्सि बनाएर बस्ने त ? उनिहरुको खुशि। सँसारका धेरै देश हरु परम्परागत स्थानिय शिप र श्रोत प्रयोग गरेर मनग्य बिदेशि पैसा आर्जन गरिरहेका छन्।त्यसमध्ये जाडरक्सि निर्माण पनि प्रमुख हो। स्विटजरल्याण्डका धेरै प्रान्तहरु मा प्रान्तपिच्छे फरक फरक स्थानिय बियरहरु उत्पादन हुन्छन्।प्रान्त पिच्छे फरक फरक बियर उत्पादन हुने मात्र होइन ।आफ्नो प्रान्तमा आफै उत्पादन गरेको बियर मात्र बेच्न पाईन्छ।यसो गर्दा त्यहाँ कुनै एउटा प्रान्तमा पुग्ने पर्यटक नयाँ फरक स्वाँदको लागि अर्को प्रान्तमा पुग्ने , जाने सम्भाबना रहन्छ। सँसारभरिकै मान्छेहरु मध्ये धेरै रातो मासु सेवन गरेर पनि सँसारकै लामो आयु खुशि पुर्बक बाँचिरहेका रसियनहरुको रहस्यमय जिबनकथा पनि कालो अँगुरको जाँड र मर्च सँगै जोडिएको छ। आज सँसारको वाईन बजार पिटिरहेको रसियन प्रबिधि सामान्यत पुस्तैनि ज्ञान शिपमा आधारित छ।
र आजपनि रसिया पुग्ने पर्यटक हरु झुम्मिने ठाउँ मध्ये अँगुर फार्म र परम्परागत ज्ञान शिपद्वारा सँचालित वाईनहाउस हरु नै हुन। हाम्रो हकमा पनि परम्परागत रुपमा मर्च,जाँडरक्सि निर्माण गर्न आबस्यक पर्ने सबै सामग्री हरु र जनशक्ति स्थानिय स्तरमै पाइने भएकोले पुँजि बाहिर पठाउनु नपर्ने आर्जन मात्रै हुने काईदाको कुटिर उध्योग हुनसक्छ। अझ आदिबासिहरुको आर्थिक हैसियत उकास्न को लागि राज्यले चाँसो र लगानि थपिदिने क्षेत्रपनि यो हुनसक्छ। जाँडरक्सि जन्य पदार्थ उपभोग स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। यसलाई आबस्यक नियम कानुन बनाएर नियमन र सँरक्षण गर्ने पाटो छदैछ। ४)राजनितिक ,सामाजिक कामको शिलशिलामा देशभित्रको प्राय नाम चलेका सबै होमस्टेहरुमा पुगेको छु।सबै होमस्टे एकादुई खानाका परिकार बाहेक उस्तै लाग्छन्।
होमस्टे बारेमा अर्को कुनैदिन लेख्नुपर्ला। आजभोलि त झन आफुलाई चुनाब जिताउन लागिपरेकाहरुलाई पैचो तिर्न बिभिन्न नामको होमस्टेमा दिईने अनुदान र तिनका गतिबिधि हेर्दा लाजले आँखा छोप्नुपर्छ। ५)सामाजिक सुरक्षामा खलललल,हत्या , बलात्कार आदि बढाउछ। त्यसको लागि त जेल,अदालत प्रहरी ,प्रसासन छदैछ। ६)खुल्ला छोड्ने त ? नछोड्ने।न्युनतम बिधि बनाएर सामान्य करको दायरामा लिने। राज्यमा बसेको हैसियतले कर तिर्नुपर्छ। खासकुरा – यो देशका उच्चपदस्थ कर्मचारी ,मन्त्रि ,नेता ,ब्यापारी,उध्योगपतिहरु यो देशका अस्थायी बासिन्दा हुन।उनिहरुको छोराछोरी ,बुहारि,ज्वाई भान्जो सबका सब युरोप ,अमेरिका , क्यानाडा , अष्ट्रेलिया तिर सके घर किनेर ,नसके फ्ल्याट किनेर बसिसकेका छन्।यिनिहरु यहाँ कमाई हुन्जेल बस्ने हुन।कुनै गडबड हुनासाथ उनिहरु भाँगिहाल्ने पोजिसनमा बसिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले के गर्दा यहाँको बासिन्दाको दिर्घकालिन भलाई हुन्छ भनेर उनिहरुलाई चाँसो छैन। त्यसमाथि झन आदिबासिहरुको आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र (मर्च र जाँडरक्सि )।यसमा उनिहरु गम्भिर भएर सोच्ने र राम्रो नराम्रो पक्ष केलाउदै उचित निति नियम बनाएर सँरक्षण गर्लान् भनि के सोच्नु ? आदिबासिहरु आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र भए भने कोमाथि शासन गर्ने ? सायद यस्तो चिन्ता पनि होला।
अलि अस्ति सिक्किमे पुर्ब मुख्यमन्त्रि पवन चामलिङ आएर हाम्रो प्रदेश नँ १ का मुख्यमन्त्रि शेरधन राईलाई हाम्रो आमा बजुहरुको मर्च बनाउने शिपलाई जोगाउनु र ब्राण्डिङ गर्नु यसो गर्न सकिए केहि भरथेग चल्छ , भनेर गएछन्। तर बिचरा अर्काको अर्हन खतनमा चल्नुपर्नेले के सँझिराख्लान्।
#नोटेड बिचार , बाद ,सिदान्त जेसुकै भएपनि अहिले हाम्रो राज्य चलाउन निति बिधि बनाउने मात्रै होइन अभ्यास गर्नेपनि देसका हुन।यिनले हाम्रो भलो चिताउदैनन्। यतिकुरा जतिचाँडो बुझ्यो,त्यति नै छिटो दुख घटनेछन्। #जिलौं !!
याम मगर बागलुङ।